Public Health in Myanmar: March 2011
Mar 29, 2011 at 3:34 PM
Q 1: အရက်မူးပြီး အနှိပ်ခန်းသွားပါတယ်။ ပြီးတော့ လက်မဆေးမိပဲ နာရီဝက်၊ ၁ နာရီလောက်မှာ ပါးစပ်ထဲ လက်နှိုက် အန်မိပါတယ်။ သွားတချောင်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်ခွဲ လောက်က နှုတ်ဘူးပါတယ်။ HIV ကူးနိုင်ခြေ ရှိမရှိ နဲ့။ HIV ကို ဘယ်လို စစ်လို့ ရပါသလဲ။ ဘယ်လောက်ကြာမှ စစ်လို့ ရမှာလဲ။ စစ်လို့ရတဲ့ နည်း ၂ နည်းရှိတယ်လို့ ကြားဘူးပါတယ်။ Anti body ဒါမှမဟုတ် Nucleaus (ပိုး) ကို စစ်တယ်လို့ ကြားဘူးပါတယ်။ ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းပြီး တိကျပါသလဲ။ ပို အချိန်စောစော သိရပါသလဲ။
Tue 3/29/2011 7:18 PM
Q 2: Spot test သွေးစစ်နည်းက မြန်တယ်ဆိုရင် သူ့ထက်ပိုကြာမှ သိရတဲ့ Elisa နည်းက ပိုတိကျတယ်လို့ သတ်မှတ်နိုင်မလား။ အထက်ပါ နည်းတွေက 99.6% အထိ မှန်ကန်တယ်လို့ စာအုပ်မှာ မှတ်သားဖူးတယ်။ ဟုတ်ပါသလား။ အတူနေဖက် အမျိုးသမီးကို Elisa နဲ့ စစ်တော့ Postive လို့ ပြောပါတယ်။ အမျိုးသားက မရှိပါတဲ့ ဘယ်လောက်ထိ မှန်ကန်နိုင်လဲ။ ပြီးတော့ နောက်ထပ် သုံးလ ချိန်းပြီး ပြန်လာစစ်ခိုင်းပါတယ်။ သေချာအောင် ထပ်စစ်တာပဲဆိုရင် နောက်တနေ့ ပြန်စစ်လို့ ရတယ် မဟုတ်လား။ ဘာလို့ သုံးလ ချိန်းတာပါလဲ။
လူထဲကို ပိုးတမျိုးမျိုး ဝင်လာတာနဲ့ အဲဒါကို ခုခံတိုက်ဖျက်ပေးမဲ့ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ Antibody (အင်တီဘော်ဒီ) ခုခံအားတွေ ထွက်လာတယ်။ HIV antibody စမ်းတယ်ဆိုတာ အဲဒါတွေ Blood သွေးထဲ၊ Saliva တံတွေးထဲ နဲ့ Urine ဆီးထဲမှာ ရှိနေ-မနေ စစ်ဆေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
HIV antibody test (အင်တီဘော်ဒီ) စမ်းသပ်နည်းဟာ လူကြီးတွေမှာ HIV ရှိ-မရှိကို အသင့်တော်ဆုံးနဲ့ အသုံးအများဆုံး စစ်ဆေးနည်း ဖြစ်တယ်။ ဈေးလဲ မကြီးတဲ့ပြင် တိကျတယ်။ ဒီနည်းကို ELISA (Enzyme-Linked Immunoabsorbent) နဲ့ EIA (Enzyme Immunoassay) ခေါ်တယ်။ ရှိနေတာ ရှာတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ သဘောက အဲဒီလူမှာ HIV ပိုး ဝင်နေပြီ။
ဒါပေမဲ့ ချွင်းချက် ၂ ခုရှိတယ်။
1. ပိုးရှိနေတဲ့ မိခင်ကနေ မွေးလာတဲ့ကလေးမှာ မအေဆီက (အင်တီဘော်ဒီ) တွေလဲ ပါလာတာမို့ ၁၈ လ အထိ ဆေးစစ်ရင် အပေါင်းလက္ခဏာ ပြမယ်။ တကယ်တော့ ဒီကလေးမှာ ပိုးရှိနေတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒီလို ကလေးမျိုးတွေကို PCR test ဆိုတာ လုပ်ပါတယ်။
2. HIV vaccine trials ကာကွယ်ဆေး စမ်းသပ်တာကို ခံယူနေသူတွေမှာလဲ အဲလိုပြမယ်။
HIV ပိုး ဝင်ထားသူ အများစုဟာ ကူးစက်တာခံရပြီး ၆-၁၂ ပါတ်အတွင်း စမ်းသပ်လို့ရတဲ့ (အင်တီဘော်ဒီ) တွေရှိလာမယ်။ ၆ လ နေမှ တွေ့တာ ရှားတယ်။ ဒိထက် ပိုကြာမယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါ။ ဒီလို ပိုးဝင်နေပေမဲ့ စမ်းလို့ မတွေ့သေးတဲ့ ကာလကို Window period ပြူတင်းပေါက်ကာလ၊ ကြားကာလ ခေါ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပိုးဝင်မယ်လို့ သံသယဝင်တဲ့နောက် ၃ လ အကြာမှာ စမ်းတာ သင့်တော်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မတွေ့သူဟာ ဥပမာ စိတ်မချရတဲ့ လိင်-ဆက်ဆံနည်းကနေ ပိုး မဝင်ခဲ့ဘူးလို့ ပြောနိုင်တယ်။ ၆ လ နေလို့မှ မတွေ့ရင်တော့ သေခြာပါတယ်။ ပိုးမကူးခဲ့ပါ။ နောက်တခါတော့ စိတ်ချရတဲ့ ဆက်ဆံနည်းကိုသာ သုံးပါ။
သတိကြီးဘို့ လိုတာက Window period မှာ တကယ်လို့ ပိုးရှိနေရင် သူများကို ကူးနိုင်တယ်။ Subtype B ပိုးမျိုးအတွက် HIV-1 antibody tests နည်းရဲ့ ပျမ်းမျှကြားကာလဟာ ၂၅ ရက်ရှိတယ်။ Antigen testing နည်းဆိုရင် ၁၆ ရက်နဲ့ NAT (Nucleic Acid Testing) နည်းက ၁၂ ရက်ကြာတယ်။ Window period မှာ Antiretroviral therapy (ဗိုင်းရပ်စ်) ဆေးသောက်လိုက်ရင် Antibodies ဖြစ်လာမှာကိုပါ နှေးစေလို့ ကြားကာလက ၁၂ လလောက်အထိ ကြာနိုင်တယ်။
ELISA test က တိကျလို့ မှားပြီး အပေါင်းပြတာ မရှိသလောက် ဖြစ်တယ်။ တကြိမ်စစ်လို့ အပေါင်းပြသူ အားလုံးကို Western blot (Protein immunoblot) နဲ့ Indirect immunofluorescence assay စမ်းသပ်နည်းတွေကို ဆက်လုပ်မယ်။ ဥရောပမှာ Line immunoassay ကိုပါ လုပ်မယ်။ ဆက်စစ်လို့လဲ အပေါင်းပြနေရင် ဝ့၁% ထက် မလွဲနိုင်တော့ပါ။ သူ့မှာ ပိုးရှိနေပြီ။
Antigen test (P24 test) (အင်တီဂျင်) စမ်းသပ်နည်းနဲ့ သေခြာစေနိုင်တယ်။ (အင်တီဂျင်) ဆိုတာ ကိုယ့်ပစ္စည်း မဟုတ်တဲ့ ပိုးမွှားလိုဟာ ဖြစ်တယ်။ ဒါမျိုး ဝင်လာရင် ကိုယ်ခန္ဓာကနေ (အင်တီဘော်ဒီ) ထုတ်စေမယ်။ HIV ပိုးရဲ့ အဲလိုဟာကို Protein P24 လို့ ခေါ်တယ်။ HIV ဝင်တာနဲ့ ၂-၈ ပါတ်အတွင်း P24 တွေ များများလာမယ်။ သွေးကို စစ်ရင် တွေ့မယ်။ ရောဂါ ရလာချိန်မှာတော့ သူတို့ ပျောက်ပျောက်သွားမယ်။ ဒါ့ကြောင့် P24 antigen test ကို အမြဲမလုပ်ဘဲ၊ စတုတ္ထ-မျိုးဆက် စမ်းသပ်နည်း အနေနဲ့သာ သုံးတယ်။ Fourth generation tests ဆိုတာ P24 antigen test နဲ့ Antibody test တွဲလုပ်တာကို ခေါ်တယ်။ ပိုတိကျတယ်။
PCR (Polymerase Chain Reaction) test ဆိုတာ HIV ပိုးရဲ့ မျိုးဇီဇကို စစ်တာဖြစ်တယ်။ ပိုးဝင်ပြီးနောက် ၂-၃ ပါတ် အကြာ စမ်းလို့ ရလာတယ်။ Viral load test နဲ့ HIV NAAT (Nucleic acid amplification testing) လို့လဲ ခေါ်တယ်။ ပိုးရှိ မိခင်ကနေ မွေးတဲ့ ကလေးကို PCR test လုပ်ရတယ်။ အမေဆီက Antibodies တွေရနေတယ်။ Antibody test က မတိကျလို့၊ ဈေးလဲကြီးတာမို့ လူတိုင်းကိုတော့ မစစ်ပါ။ ချမ်းသာ-တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ သွေးလှူရာမှာလဲ PCR test ပါ လုပ်တယ်။
• Rapid HIV tests ဆိုတာ နည်းပညာအရ ELISA tests နဲ့တူပေမဲ့ စစ်ရတာ မိနစ် ၂ဝ သာကြာတယ်။ သွေး ဖြစ်ဖြစ် သွားရည် ဖြစ်ဖြစ် စစ်နိုင်တယ်။ Rapid Antibody Test ကို Rapid or point-of-care test ခေါ်တယ်။ Qualitative immunoassays အရေအတွက်ကို စစ်တာ ဖြစ်တယ်။
• Home testing နည်းက ကိုယ့်ဖါသာကိုယ် အိမ်မှာတင် သွေးဖြစ်ဖြစ် တံတွေးဖြစ်ဖြစ်နဲ့ စမ်းလို့ အဖြေကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း သိနိုင်တယ်။ ပိုသေခြာအောင်တော့ ဓါတ်ခွဲခမ်းမှာ ထပ်စစ်သင့်တယ်။
• Home sampling kit ဝယ်၊ ကိုယ့်သွေးနဲ့ စမ်းပြီး၊ ဓါတ်ခွဲခမ်း ပို့နိုင်တယ်။ ရက် သိပ်မကြာခင် အဖြေကို ဖုန်းဆက် မေးနိုင်တယ်။ သူများ မသိအောင် လုပ်နည်းတခုပေါ့။ နိုင်ငံအတော်များများမှာ HIV ဆေးစစ်တာကို လှို့ဝှက်ဘို့နဲ့ ကာယကံရှင်က စမ်းခြင်မှ စမ်းဘို့ သတ်မှတ် ထားတယ်။
• Home Access Express HIV-1 Test ကို FDA က အသိအမှတ်ပြုထားပြီး ဖြစ်တယ်။ OraQuick ဆိုတာ မိနစ် ၂ဝ သာ ကြာတဲ့ Antibody test ဖြစ်တယ်။ Blood သွေး၊ Plasma (ပလာစမာ) သွေးရည်ကြည် နဲ့ Oral fluid ပါးစပ်က အရည် တခုခုကို စမ်းနိုင်တယ်။ HIV 1 နဲ့ HIV2ပိုးတွေကို စမ်းတာဖြစ်တယ်။
• Uni-Gold နည်းက ၁ဝ-၁၂ မိနစ်သာကြာတဲ့ Rapid HIV antibody test ဖြစ်တယ်။ သွေးစက်ကို စမ်းတာ။ FDA က အသိအမှတ် ပြုထားတဲ့ HIV 1 ကို စစ်ဆေးနည်း ဖြစ်တယ်။
• Clearview Complete HIV 1/2 နဲ့ Clearview HIV 1/2 Stat-Pak နည်းတွေက သွေး၊ သွေးထဲက (ပလာစမာ)၊ (စီရမ်) ကို စမ်းရတဲ့ အမြန်နည်း၊ ၁၅ မိနစ်သာ ကြာတယ်။
• iDiagnostics Rapid HIV Test နည်းကို အသိအမှတ် မပြုရသေးဘူး။
HIV Antibodies တခါ မတွေ့ယုံနဲ့ ကူးစက်မှု ကင်းတယ်လို့ ချင်ချင်း ပြောမရသေးပါ။ ၂-၆ ပါတ်ကြာမှာ တွေ့လာ နိုင်တယ်။ ဆေးစစ်လို့ အပေါင်းဖြစ်နေသူဟာ တချိန်မှာတော့ Antiretroviral treatment ဆေးကုဘို့ လိုလာမယ်။ ဆေးဆိုတာက ဗိုင်းရပ်စ်ကို နှေးသွားအောင်နဲ့ ခုခံအားကို ထိန်းဘို့ဖြစ်တယ်။ ပိုးရှိနေပေမဲ့ Safer sex စိတ်ချရတဲ့ လိင်ဆက်ဆံရေး လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်အရင်က လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဘူးသူတွေကိုလဲ အသိပေးသင့်တယ်။ အိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆိုရင်လဲ ရောဂါ အကြောင်း သိအောင်လုပ်ပါ။ ကာကွယ်နည်း၊ ကုသနည်းတွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။
CD4 T-cell count စစ်ဆေးနည်းဟာ HIV ရောဂါရှာတာ မဟုတ်ဘူး။ HIV-positive ပိုးရှိနေသူတွေရဲ့ Immune system ခုခံအား-စနစ်ကို စောင်ကြည့်တာသာ ဖြစ်တယ်။ ရောဂါအခြေအနေ တိုးတက်မှု-ဆုတ်ယုတ်မှုကို တိုင်းထွာတာ ဖြစ်တယ်။ CD4 T-cell counts နည်းတယ်ဆိုတာ ဒီရောဂါတခုထဲမှာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဗိုင်းရပ်စ်၊ ဗက်တီးရီးယား၊ ပါရာဆိုက် ဝင်တာ၊ အနာရင်းတာ၊ တီဘီ ရှိတာ၊ မီးလောင်တာ၊ ခိုက်မိတာ၊ (ပရိုတင်း) ကို အကြောဆေးထိုးတာ၊ အာဟာရချို့တဲ့တာ၊ အားကစား လုပ်တာ လွန်ကဲတာ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာ၊ စိတ်ပိုင်း ဖိစီးမှုများတာ နဲ့ အထီးကျန် နေရတာတွေကြောင့်လဲ များနိုင်တယ်။
CD4 counts ပုံမှန်ဆိုရင် 500 ကနေ 1500 CD4+ T cells/microliter ရှိတယ်။ ယေဘုယျ ပြောရရင် အမျိုးသမီးတွေက ပိုနည်းတယ်။ HIV ပိုးရှိနေသူမှာ CD4 T-cell count က 200 cells/μL ထက် နည်းတာ၊ ဒါမှမဟုတ် Opportunistic infections အခွင့်ကောင်းယူ ကူးစက်တာ တခုခုရှိမှသာ ၁၉၉၂ ကတည်းက AIDS လို့ တရားဝင် သတ်မှတ်ပါတယ်။
Labels: health education, HIV/AIDS
Labels: Reproductive Health မျိုးပွားခြင်းဆိုင်ရာ ဆေးပညာ, သန္ဓေတားဆေးနှင့် သားဆက်ခြားနည်း
အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်လဲ ဖတ်ပါ Menstruation ရာသီ မမှန်ခြင်း
Q 1: ကျွန်မအသက် သုံးဆယ့်တစ်ပါ။ ကျွန်မ အခု (့) မှာပါ။ ကျွန်မမှာ တစ်နှစ်တစ်လ အရွယ် သမီးတယောက် ရှိပါတယ်။ ကျွန်မ သမီးကို ဗိုက်ခွဲပြီး မွေးတာပါ။ ကလေးက အခုထိ မိခင်နို့စို့တုန်းဘဲ။ ကျမ ရာသီက ကလေးမွေးပြီး လေးဆယ့်ငါးရက်ထဲက ပုံမှန်လာပါတယ်။
ဒီတခါ ရာသီလာတဲ့ အချိန်မှာ ပုံမှန် မဟုတ်ဘဲ၊ ၅ ရက် စောလာပြီး၊ သွေးက တစက်တစတ်ဘဲ ဆင်းတယ်။ အခုလို သွေးတစက်တစက် ဆင်းနေတာ တလနည်းပါး ရှိတော့မယ်။ ကျမ မည်သည့် ကိုယ်ဝန် တားဆေးကိုမှ မသုံးစွဲခဲ့ပါ။ ကျွန်မလဲ စိတ်ပူလို့ Pregnancy test နဲ့ စမ်းကြည့်တယ်။ Negative ဘဲပြတယ်။ စိုးရိမ်လို့ သူငယ်ချင်းတွေ မေးကြည့်တော့ သူတို့က ရာသီထိန်၊ ရာသီ ငုတ်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ဒီက ဆေးခန်းကို ပြဖို့ကလဲ နားလည်မှု လွဲတတ်လို့ ဆရာ့ဆီက အကူအညီ တောင်းတာပါ။ ဘဲလို ဆေးမျိုး သောက်သင့်လဲနှင့် ရောဂါအကြောင်းကို ဖြေကြားပေးပါရှင့်။
ဘာမှ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ရက်စောလာတာလည်း ကိစ္စမရှိပါ။ နည်းတာလဲ အဲလိုဘဲ။ မှန်လာပါလိမ့်မယ်။ ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ နောက်ကိုယ်ဝန်ရှိဘို့ ပိုနှေးတတ်တယ်။ ကလေးကို ၁ နှစ်ဆို နို့ဖြတ်သင့်ပြီ။ ၆ လ အရွယ်ကတည်းက အစာကြွေးရမယ်။ ဖြေးဖြေး တိုးတိုးကြွေးပေါ့။ နို့ဖြတ်မှလဲ ကလေးက တခြားအစာ စားလာမယ်။
ဆီးစစ်လိုက်တာ ကောင်းတယ်။ အခုလို မရပ်သေးတာ သားအိမ်ခြစ်စရာလဲ မလိုဘူး။ ခပ်လွယ်လွယ် ဆေးနည်းပေးပါမယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေး Contraceptive pill ကို သောက်နိုင်တယ်။ လူအများစုသောက်တဲ့ ဆေးပြောတာပါ။ ဆေးကပ်တိုင်းမှာ အရောင် ၂ မျိုးပါတယ်။ အဖြူရောင် ၂၁ လုံးကို တနေ့ ၁ လုံးသောက်နေသမျှ သွေးမဆင်းပါ။ ရာသီရက် မမှန်သူတွေကို ဒီနည်းက အလွယ်ဆုံးဘဲ။ အိမ်ထောင်မရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေဆိုရင် ဆေးအကြောင်း ရှင်းပြလိုက်ပြီး၊ ဆေးလုံးလေးတွေကို ဆေးကပ်ကနေ ထုတ်ပြီး ပေးရတယ်။ သူများမြင် အထင်မလွဲအောင်ပေါ့။ တချို့ကို အဲလို ၃-၄ လ အသောက်ခိုင်းရင် ပြန်မှန်သွားနိုင်တယ်။
Q 2: နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့နာပါ။ ဒီတစ်လ ဓမ္မတာလာတာ နဲနဲဆန်းတယ်။ အရင်လတွေကနဲ့ ပုံမှန် မဟုတ်လို့ပါ။ အရင်လက ၁၄ ရက်နေ့မှာ စပြီးတော့ ၁၄-၁၅ ဆက်တိုက် ဆင်းပါတယ် ၁၆ ရက်နေ့မှာ တစ်ရက် တန့်သွားပါတယ်။ ပြီးမှ ၁၇ နဲ့ ၁၈ ရက်မှာ ပြန်ဆင်းပါတယ်။ ဆရာရေးခဲ့တဲ့ စာတွေအရ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်လို့ မှတ်ယူထားပါတယ်။ ဒီလကျတော့ ၁ ရက် နေ့မှာ စဆင်းပြီး၊ ၁ ရက် ၂ ရက် ၃ ရက် ဆက်တိုက်က သာမန်မဟုတ်ပဲ အခဲတွေ ဆင်းတယ်။ အရောင်ကတော့ ညိုညစ်ညစ် အရောင်မျိုးဖြစ်ပြီး၊ အနံ့ နဲ့ ခံစားမှုတော့ မရှိပါဘူး။ ခါးကိုက်တာတို့ ဗိုက်နာတာတို့လဲ မရှိပါဘူး။ ပြီးတော့ ၄ ရက်နေ့က နေစပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်ဆင်းတာကိုက အရမ်းများတယ်။ ဒီနေ့ထိတော့ မရပ်သေးပါဘူး။ အခု ရက်ပိုင်းတော့ နဲတော့ နဲသွားတယ်။ ဓမ္မတာ လာခါနီးဆို အဖြူဆင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခေါက် အဖြူလဲ မဆင်းပါဘူး။ အဲဒါ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ စိုးရိမ်စရာ ရှိပါသလား။ အရင်ကတော့ ရှမ်းပျိုမယ် သွေးဆေး သောက်ပါတယ်။ နာကျင်မှုအတွက် Dofenal 500 mg တစ်နေ့ တစ်လုံး သောက်ပါတယ်။ ကောင်းကျိုး-ဆိုးကျိုး ပြောပြပေးစေလိုပါတယ်။ နောက်ပြီး တလွဲယူဆထားတာက ဓမ္မတာလာရင် ခေါင်းမလျှော်ရ ဆိုတာလဲ ရှိပါတယ်။ မတည့်တဲ့ အစာတွေအဖြစ် ပြောင်းဖူးတို့ မာလကာသီးတို့ မစားရဘူး ဆိုတာလဲ ရှိပါတယ်။ အဲလိုမျိုးတွေလဲ တကယ်ရှိလား။ ဒါတွေနဲ့ ဆိုင်-မဆိုင်လဲ သိချင်ပါတယ်။ အသက်က ၂၂ နှစ်ပါ။
Q 3: သမီးက အသက် ၂၃ နှစ်ပါ။ သိချင်တာလေးတွေ မေးပါရစေ။ သမီးက ရာသီလာတာ မမှန်ပါဘူး။ တခါတလေ ၂ လမှ တခါ လာပါတယ်။ အရင်ကတော့ အမေက သွေးဆေး အမြဲတိုက်ပါတယ်။ မြန်မာဆေးတွေ။ ခုက ဒီမှာ ဝယ်လို့လည်း မရပါဘူး။ ခု ဝက်ခြံတွေလည်း မျက်နှာမှာရော ကျောမှာပါ ပိုပေါက်လာပါတယ်။ သူငယ်ချင်းကပြောလို့ ဂျင်းပြုတ်ရည် လည်း သောက်ပါတယ်။ ဆရာရှင့် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ဖြေကြားပေးပါရှင်။
ရာသီမမှန်တာ မိန်းကလေးအတော်များများမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ ၂ လမှ တခါလာယုံနဲ့ ဘာမှ စိုးရိမ်စရာ မလိုပါ။ ဝက်ခြံလဲ ပေါက်တယ်ဆိုရင် အပျိုဖြစ်မှာပေါ့။ သိပ်ရင်းနှီးလွန်းတဲ့ သမီးရည်းစားတောင် ထားပုံမရဘူး။ ဆေးပညာအရ ဖြစ်ဘို့ များတာကို ပြောတာပါ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ စပ်စုတာမဟုတ်ပါ။ ဗေဒင်ဟောတာလဲ မဟုတ်ဘူး။ မမှန်ရင်လဲ “မှားသော ဆေးသမား ရှိ၏” လို့ မှတ်ပါ။
ဗမာသွေးဆေးတွေကလည်း အသုံးတည့်သူတွေမှာ တည့်တယ်။ ချင်းပြုတ်ရည်ကလည်း တချို့အတွက် အလုပ် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ပိုပြီးသိရရင် ပိုကောင်းမယ်။ “ပိန်သလား၊ ဝသလား၊ ပိန်လာနေသလား။ ကျန်းမာရေး နောက်ကြောင်းမှာ ထူးခြားတာရှိသလား။ ဆေးရုံတက်ရဘူးတာ၊ ဓါတ်မှန်ရိုက်တာ”။ မသိတာ အသာထားပြီး ယေဘုယျ ဖြေပါ့မယ်။
ရာသီမမှန်တာမှာ ပတ်ဝန်းကျင်လို့ ခေါ်လေ့ရှိတဲ့ အကြောင်းခံရှိတတ်တယ်။ နေမကောင်းတာ ဥပမာ တီဘီ၊ စိတ်ဖိစီးမှု များတာ၊ အာဟာရ မပြည့်တာ၊ သွေးအားနည်းတာ၊ လေ့ကျင်ခန်း-အလုပ် များလွန်းတာ၊ ခရီးထွက်ရဖန် များတာတွေ ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒါတွေကို ပြင်ပါ-ကုပါ။
နောက် အကြောင်းခံ တမျိုးကတော့ ဇီဝကမ္မအပြောင်းအလဲ ရှိလို့ပါ။ ရာသီဆင်းတာကို ထိန်းကြောင်းပေးနေတာ သုံးခုဟာ အထာမကျရင် ရာသီလာ မမှန်ဘူး။ နောက်ဆုံးအကြောင်းခံတခုကတော့ Polycystic ovarian syndrome ရောဂါပါ။ လိုမယ် ထင်ရင် ဒီနှစ်မျိုးအတွက် OG ပြပါ။ Oligomenorrhea ခေါ်တဲ့ ရာသီနည်းလွန်းရင် သားသမီး မရနိုင်တာ ဖြစ်စေတတ်တယ်။ ဒါတွေ ထည့်ရေးတာက ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ မပြည့်မစုံရေးလို့ မကောင်းတဲ့ အတွက်ပါ။ လူ ၁ဝဝ-၁ဝဝဝ မှာ ၁ ယောက် ဖြစ်တာလဲ ပါရတယ်။
ဝက်ခြံဆိုတာ ရာသီဆင်းတာလိုဘဲ ဟော်မုန်းဓါတ် အပြောင်းအလွဲကြောင့်ဖြစ်စေတာပါ။ လူတိုင်းမှာ ကျား-မ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးလုံးရှိကြတယ်။ Androgens ကျားဟော်မုန်းက ပိုကဲနေရင် ရာသီနည်းတာ ဖြစ်စေတယ်။ အရေပြား မသန့်ရှင်းတာ၊ လေထု မသန့်တာကြောင့်လဲ ဖြစ်စေနိုင်သေးတယ်။
သနပ်ခါးအစစ် သဘာဝဖြစ် အလှအပ အသုံးအဆောင်သာ သုံးပါ။ ကြော်ညာကောင်း (ကော့စ်မက်တစ်) တွေ မသုံးသင့်ပါ။ အဆီ-အငန်များ အစားအစာ ရှောင်ပါ။ တကယ်လို့ အနာရင်းသလို ဖြစ်လာရင်၊ ပြည်တည်ရင် Tetracycline, Erythromycin ၂၅ဝ မီလီဂရမ် ၆ နာရီခြား၊ ဒါမှမဟုတ် Doxycycline ၁ဝဝ မီလီဂရမ် ၁၂ နာရီခြား၊ ၄-၅ ရက် သောက်ပါ။
ဝက်ခြံကို လက်နဲ့ ခဏခဏ မကိုင်ပါနဲ့။ မျက်မှာမှာ ပေါက်တဲ့ ဘာအနာဖြစ်ဖြစ် မမှည့်သေးခင် ညှစ်မထုတ်ရပါ။ သွေးအားအတွက် Ferrous ဆေး၊ Folic acid ဆေးတွေသောက်ပါ။ ဝက်ခြံအတွက် ဗီတာမင် B အပြင် A သောက်ဘို့ လိုတယ်။ Zinc ဓါတ်များ အစားအစာ (ပင်လယ်စာ၊ အစေ့အဆံ၊ အသဲ၊ ငါး၊ ဥ၊ ဂျုံ၊) နဲ့ Chromium ဓါတ်များ အစားအစာ (သစ်သီးဖျော်ရည်၊ ငှက်ပျောသီး၊ စပျစ်သီး၊ အာလူး၊ အမဲသား၊ မုံလာဥစိမ်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊) စားပါ။
တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပါ။ ခေါင်းအုံးစွပ် ၂ ရက်တခါ လဲပါ။ မျက်နှာကို ဆံပင်က လာလာမထိစေသင့်ပါ။
လစဉ် ရာသီလာနေသူများလဲ ဝက်ခြံပေါက်တတ်တယ်။ တရားခံက Androgens ပါဘဲ။ ဝက်ခြံမှာ ခေါင်းဖြူ-ခေါင်းမဲ ၂ မျိုး ရှိတယ်။ အဖြူက အရေပြားထဲ မြုတ်နေပြီး၊ အမဲက အပေါ်မှာ။ ပြည်ဖြစ်လာရင် ဝါလာမယ်။ သန့်ရှင်းရေး လုပ်တာက အပြင်းစားမဟုတ်တဲ့ ဆပ်ပြာ၊ ဗက်တီးရီးယားသေစေနိုင်တဲ့ neem soaps ဆပ်ပြာလဲကောင်းတယ်။ မျက်နှာ အဆီမပြန်စေနဲ့။ မိတ်ကပ်သုံးစရာရှိရင် နဲနဲ-ပါးပါးသာသုံးပါ။ အရေပြားက (ဆဲလ်)တွေ လေဝအောင်လို့။ သေသွားတဲ့ (ဆဲလ်) ခပ်ညိုညိုတွေကို အသာအယာ ဖယ်ထုတ်ပေးပါ။ ရေနွေးလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်ပါ။ ရေများများသောက်ပါ။ နံ့သာဖြူလိမ်းတာလဲ ကောင်းပါတယ်။
ရာသီမှန်လာမယ်ဆိုရင် ဝက်ခြံပါ သက်သာလာမယ်။ အိမ်ထောင်ရက်သား ကျသွားသူများ ပျောက်သွားတယ်။ အိမ်ထောင် မရှိသေးသူကို ရှိအောင် အားပေးတာ မဟုတ်ပါ။ အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ “နောင်ပြင်ရန် ခက်သည့်အမျိုး သုံးပါး” ထဲမှာပါလို့ ဝက်ခြံ ပျောက်ချင်တာလေးနဲ့ မမြန်ဆန်လေနဲ့။
အပျိုလေး-အပျိုကြီးများလည်း ကိုယ်ဝန်ဆောင် တားဆေး (အများဆုံးသုံးကြတဲ့ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲ စားဆေး) ကို သောက်ရင် ရာသီလာရက် မှန်စေတယ်။ ၂၈ ပြားပါတဲ့ ဆေးကပ်မှာ ၂၁ လုံးက အရောင်တမျိုး၊ ၇ လုံးက အရောင်တမျိုး လာလေ့ရှိတယ်။ အဖြူရောင် ၂၁ လုံး သောက်နေတုံး ရာသီမလာဘဲ၊ ဒီဆေးလုံးတွေ ကုန်တာနဲ့ ရာသီလာမယ်။ ဒီဆေးကပ်ကို အနည်းဆုံး ၃-၄ လ ဆက်သောက်လိုက်ရင် သူ့ဖါသာသူ ရာသီလာရက် မှန်စေနိုင်တယ်။
ဆရာ့ဆေးခန်းမှာ ဒီလိုဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေလာရင် ကိုယ်ဝန်တားဆေးကပ်ကို တလုံးချင်း ဖေါက်ပြီး ပေးလိုက်တယ်။ အပျိုမိန်းကလေးကို သူများမြင် အထင်မလွဲစေအောင်ပေါ့။ ကောင်းသွားကြပါတယ်။
Q 4: သမီး ပုံမှန်ရာသီက ၂၈ ရက် ၁ ခါ လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရာသီလာပြီး ၁ဝ ရက် ၂ ပတ်လောက်နေရင် နဲနဲ ပြန်လာနေတတ်တယ်။ ပုံမှန်လိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ အပေ့ါသွားရင် ထွက်လာတာမျိုး အဖြူနဲ့ ရောပြီး ထွက်လာတာမျိုး။ Daily pad အသေးလေးတွေ သုံးရတာပေါ့။ အဲဒါဘာလို့ဖြစ်တာလဲ။ တခုခုများ အထဲမှာ ဖြစ်နေလို့လား။ အရင်က မဖြစ်ဖူးပါဘူး ဒီလိုဖြစ်တာ ၃-၄ လ လောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ပတ်က အိမ်ထောင်ကျပါတယ်။ မင်္ဂလာဦးည ပြီးတော့ နောက် ၃-၄ ရက် လောက်မှာ အဲလိုမျိုး ဆီးသွားတဲ့အချိန် လေလည်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ အနီထွက်လာတယ်။ အဲဒါက ပုံမှန်ပဲလား။ အဲလိုဖြစ်တဲ့ ဒီအပတ်မှာ ပြန်နေဖြစ်တော့ စ စခြင်းတော့ ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် နောက်တော့ အနီနဲနဲ ဆင်းလာတယ်။ သမီးတို့ အသက် ၂၈ ကိုယ်စီပါ။ ယောက်ျားကတော့ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ ကျန်းမာပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ နာကျင်မှုတော့ မရှိပါဘူး။ ကိုယ်ဝန်တားဆေး မသုံးပါဘူး။ ယားတာတော့ မဖြစ်ပါဘူး။ အရင်ထဲက အဖြူကတော့ တခါတလေ ဆင်းတယ်။ အိမ်ထောင်ကျတာ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကမှပါ။ အိမ်ထောင်မကျခင် ၄-၅ လ လောက်မှာ အဲလို ဖြစ်တာကို သတိထားမိတာပါ။ အနီသက်သက်ဆင်းလာတာမျိုး အဖြူနဲ့ ရောပါလာတာမျိုးပါ။ သူလဲ လန့်နေသလို သမီးလဲ လန့်နေတယ်။
အိမ်တောင်ကျတာနဲ့ မဆိုင်ဘဲ မကျခင်ကတည်းက ဖြစ်တာမို့ အိမ်ထောင်ဘက်က ပြဿနာ မဟုတ်နိုင်တော့ပါ။ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ STD တွေကိုပါ လက်ညှိုးထိုးစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။
ဖြစ်တတ်တဲ့ အခြေအနေတခုသာ ဖြစ်တယ်။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ရာသီများလာတဲ့သဘောဖြစ်ဘို့ များတယ်။ ဒီအသက်မျိုးမှာ ရောဂါကြီး မဖြစ်သလောက်ပါ။ ဆီးစပ်နေရာကို ဖိကြည့်လို့လဲ နာပုံမပေါ်ပါ။ နာရင် မျိုးပွါးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်တာမျိုး စဉ်းစားရတယ်။ အခု ဟုတ်ပုံမရပါ။ တခြားနေရာ (နှာခေါင်း၊ သွားဖုံး) ကနေ သွေးမယိုတာ မဖြစ်ဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။
ဒီတော့ ရာသီမှန်အောင်လုပ်ဘို့ဘဲလိုမယ်။ ဘာမှ မလုပ်ဘဲနေရင်တောင် မှန်လာတတ်သေးတယ်။ အိမ်ထောင်ကျ လိုက်တော့ ဟော်မုန်းအချိုးအစားလဲ ပြောင်းလာနိုင်လို့ပါ။
အိမ်ထောင်ကျပြီး ဆက်ဖြစ်နေသေးပြန်တာမို့ OG မပြခင် ဆေးစားကြည့်ပါ။ မွေးလမ်းကြောင်းစမ်းတာ လုပ်ရင် ပိုပြီး ခန့်မှန်းနိုင်တယ်။ အလွယ်ဆိုးနည်းကတော့ ကိုယ်ဝန်တားဆေး သောက်ပါ။ အများဆုံးသုံးနေကြတဲ့ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲဆေးပြား သောက်ပါ။ တနေ့ ၁လုံး ၂၈ ရက် သောက်ရတာမျိုး ပြောတာပါ။ ရှာရတာလဲ အလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဆေးပါ။ ရာသီ တခါဆင်းအောင် စောင့်ပါ။ ဆင်းတာရပ်တာနဲ့ ဆေး တနေ့ ၁ ပြားသောက်ပါ။ ဆေးမကုန်ခင် ရာသီ ပြန်မဆင်းပါ။ အဲလို လမှန်-ရက်မှန်ဖြစ်တာ ၃-၄ လ နောက်မှာ ရပ်လိုက်ပါ။ ဆေးကို မနက်ခင်း သောက်တဲ့အကျင့်လုပ်တာ ကောင်းတယ်။ မေ့သွားရင် နေ့ခင်းသောက်လိုက်လို့ ရတာမို့ ရက်မကျော်တော့ပါ။
အထောက်အကူအဖြစ် သံဓါတ်အားဆေးနဲ့ ဗီတာမင် စီ သောက်ပါ။ ကျန်းမာ-ချမ်းသာကြပါစေ။
Q 5:မိန်းကလေးများ အများအားဖြင် Menstruation လာတိုင်း ဗိုက်အောင့်ကြတယ်။ အဲဒါကို ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမှာလဲ။ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာ ရှိလာနိုင်သလား။ သိရင်ဝေမျှပေးပါ။
A: ရာသီလာရင်နာတာ Dysmenorrhea မှာ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာ မရှိပါ။ NSAIDs ခေါ်တဲ့ Aspirin, Ibuprofen, Ketoprofen, Naproxen, Meferannic acid စတဲ့ အနာ-အကိုက်-အဖျား သက်သာဆေး တခုခု သောက်ပါ။ နေရာတကာ ဝယ်လို့ရပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတွေက ဆေးကို နာမယ် အမျိုးမျိုး ပေးကြတယ်။ နာတတ်တဲ့သူတွေ သွေးဆင်းစ ကတည်းက သောက်သင့်တယ်။ ၂-၃ ရက် ထက်မလိုပါ။ တနေ့ ၃ ကြိမ်ဆို ရတယ်။ ဆေးကို အစာနဲ့ နီးပါစေ။ တကယ် လေနာရှိရင် သတိထား သောက်ပါ။ ဒီဆေးနဲ့မှ မရသူတွေကို Oral contraceptives ကိုယ်ဝန် တားဆေး ပေးရတယ်။ နာတဲ့နေရာကို ရေနွေးအိပ် ကပ်နိုင်တယ်။ လေ့ကျင်ခန်း လုပ်သင့်တယ်။ ရေနွေးနဲ့ ရေချိုးသင့်တယ်။
Posted by Dr. Tint Swe 26 comments
Labels: Q and A, Reproductive Health မျိုးပွားခြင်းဆိုင်ရာ ဆေးပညာ, Reproductive organ disorders မျိုးပွားအင်္ဂါ ပြဿနာ
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၁၂) မိန်းမပီသတာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ Amenorrhea
ကျွန်မမှာလဲ ရာသီမမှန်တဲ့ ပြဿနာ ရှိပါတယ်။ ရာသီစလာတဲ့ အရွယ် ကတည်းက ခုထိမမှန်တာပါ။ အခုအသက်က ၂ဝ ပါ။ အရင်တုန်းက အတော်လေး ပိန်ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ ဝချင်လို့ အစားတွေစား လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်နဲ့ ဝလာတယ်။ သွေးအားကတော့ နည်းပါတယ်။ ပုံမှန် ၉ဝ-၆ဝ ပဲရှိပါတယ်။ Folic acid ပါတဲ့ Vifron အားဆေးလဲ သောက်ပါတယ်။
ရာသီ မမှန်တာကတော့ တစ်ခါတလေ ၃ လလောက်အထိကြာ တတ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာလဲ အာရှတော်ဝင်မှာ တစ်ခါ သွားပြပါတယ်။ OG က ဓါတ်မှန်တွေ ရိုက်ခိုင်းပါတယ်။ သွေးလဲစစ်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်ဆေးတာ ဆွေးနွေးတာ အချိန် နည်းနည်းပဲ ပေးပါတယ်။ Polycystic Ovarian Syndrome အဲဒါနဲ့ပါတ်သက်တာ စစ်ရဲ့လားလဲ မသိပါဘူး။ ကျားဟော်မုန်းနဲ့ ပါတ်သက်တာလဲ စစ်ရဲ့လား မသိဘူး။ အဲဒါနဲ့ နောက်တခါ ဆေးခန်း မပြဖြစ်တော့ပါဘူး။ ကြားဖူးတာက လည်ပင်းက သိုင်းရွိုက်အကြိတ် ကြောင့်လဲ ဖြစ်တတ်တယ်ဆို ဟုတ်လားဆရာ။ သိုင်းရွိုက်အကြိတ်နဲ့ မိန်းကလေး ရာသီလာတာ ဆက်စပ်မှု ရှိရင်လဲ ပိုစ့်တစ်ခု တင်ပေးရင် ဝမ်းသာမှာပါဆရာ။
မကြာမကြာတွေ့ရတတ်တဲ့ မျိုးဥအိမ်အလုံးခေါ်တဲ့ Ovarian cyst ဖြစ်တိုင်းလည်း PCOS မဟုတ်သလို PCOS ရှိတိုင်းလဲ မျိုးဥအိမ်ကြီးနေတာ ဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ရာသီနည်းတိုင်း၊ မမှန်တိုင်း၊ အဝမလွန်-အလွန် မပိန်ရင်၊ ဒီရောဂါမျိုး မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ကလေးဖွါးဘူးရင်လဲ ဖြစ်ဘို့ နည်းတယ်။ မိန်းမပီသသူတွေ စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ မ-လိုလို၊ ကျား-လိုလိုဆိုရင် လိုတယ်။ စိတ်က “ယောက်ျားမိန်း” ဖြစ်နေတာထက် ရုပ်က ဖြစ်နေရင် စစ်ဘို့လိုတယ်။ ဝက်ခြံထူ၊ အမွှေးကြမ်း၊ နှုတ်ခမ်းမွှေးရေးရေး ဆိုတာမျိုး ပြောတာပါ။
Amenorrhea ရာသီမလာခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဟာ (၁) Hypothalamic-pituitary-ovarian axis ဖိုခနောက်ဆိုင် အကြောင်းသုံးပါး၊ (၂) မွေးလမ်းကြောင်းခန္ဓာဗေဒ ပုံမှန်မဟုတ်လို့နဲ့ (၃) ဇီဝအလုပ် မမှန်တာတွေကြောင့် ဖြစ်ရပါတယ်။
Hypothalamic အကြောင်းရင်းဆိုတဲ့ထဲမှာ ဦးနှောက်ကင်ဆာလဲ ပါတယ်။ Pituitary causes ဆိုတာကတော့ နို့ထွက်စေတဲ့ ဟော်မုန်း Prolaction သိပ်များနေရင်၊ ဒါမှမဟုတ် Pituitary ကင်ဆာ၊ အမှန်က ဦးနှောက်ကင်ဆာပါဘဲ။ သူ့ကို ဓါတ်ကင်မိလို့ကြောင့်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Ovarian မျိုးဥအိမ် အကြောင်းခံထဲမှာ Hyperandrogenemia ခေါ်တဲ့ ကျားဟော်မုန်းတွေ သိပ်များနေရင်၊ ဓါတ်ကင်ရရင်၊ ကင်ဆာဆေး သောက်ရရင် ဖြစ်တယ်။
အပျိုမြှေး လုံးဝပိတ်နေတာမျိုးက မိန်ကလေးတယောက် အရွယ်ရောက်ချိန် လွန်တာတောင် ရာသီပန်း မပွင့်သေးတာမျိုး။ အသက် ၁၄-၁၅ နှစ်အထိ ရာသီမလာရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ မသိဘဲ ကြာသွားလို့ ဗိုက်ကလေးက ဖေါင်းဖေါင်းလာ၊ မအေက ရာသီအကြောင်းမေး၊ မလာသေးဘူးပြောတော့ တမျိုးထင်။ ကံဆိုးရင် အရိုက်ခံရ။ နှိပ်စက်ပြီး ပုလိပ်စစ်စစ်ခံရမယ်။ နောက်ဆုံးမှ ကျန်းမာရေး အသိရှိသူတွေ စောင်မလို့ ဆရာဝန်လာပြတယ်။ အပျိုမြှေးမှာ ထုံဆေးလေးထိုး၊ ခွဲစိတ်ဒါးနဲ့ ဒေါင်လိုက်တချက် ကန့်လန့်တချက် ခွဲပေးလိုက်တာနဲ့၊ လားလာ့း့ အမဲ-အညို၊ နောက် နီညိုညို-အနီ ရာသီသွေး ဟောင်းတွေ ဒလဟော ဆင်းလာတာ၊ ဒီလိုဝေဒနာမျိုး နှစ်ခါမက လုပ်ပေးရဘူးတယ်။
မွေးလမ်းကြောင်းမှာ မွေးရာပါ အကန့်ရှိနေတာကို ခပ်ရှားရှား တွေ့ဘူးတယ်။ ပါမောက္ခ-မမတွေက ဆေးကျောင်းသားများကို သင်ကြားဘို့ ရှားတာမှန်သမျှ စုထားကြရတယ် မဟုတ်လား။ “အာစရိရ-ကျေးဇူး”၊ “ဂီလာန-ကျေးဇူး” အထူး မမေ့ပါ။
တခြား အကြောင်းရင်းတွေလဲ ရှိသေးတယ်။ “မီးယပ်ပိန် မီးယပ်ခြောက်”လို့ အခေါ်ခံရသူမျိုး။ မော်ဒယ် (ငါးဖေါင်ရိုးခြောက်) သင်တန်းသူများ။ နာတာရှည်ရောဂါသည်၊ စိတ်ဖိစီးမှုခံစားနေရသူ၊ မူးယစ်ဆေးစွဲသူ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ များလွန်းသူ၊ ပဋိသန္ဓေတားဆေးနဲ့ အဆင်မပြေသူ ဆိုတာတွေ ဖြစ်တယ်။ အာဟာရချို့တဲ့သူတွေလဲ ပါတယ်။ (အီသီယိုးပီးယာ) နဲ့ မြန်မာဟာ အကြောင်းခံမှာ တမျိုးစီပေမဲ့ အကျိုးပေးတူကြတယ်။ ဂုဏ်မယူစရာပေါ့ဗျာ။
ဒီလိုဖြစ်လာရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ Thyroid essay စစ်ဆေးလိမ့်မယ်။ များနေရင် ဆေးပေးမယ်။ အရင်က စားဆေးသာရှိပေမဲ့ ခုခေတ်မှာ အဏုမြူဆေးကြွေးတာ ထိရောက်ပါတယ်။ မပျောက်ခင် ရာသီရော ကိုယ်ဝန်ကိစ္စတွေပါ မမှန်တာဖြစ်စေတယ်။ တလောက မိတ်ဆွေတဦးရဲ့ ဇနီးကို မြင်တာနဲ့ သံသယရှိလို့ ဆေးစစ်ခိုင်းရတယ်။ ဒိအရင် ကိုယ်ဝန်က ဗိုက်ထဲမှာတင် ကလေးအသေ Intra-uterine death (IUD) ဖြစ်လို့ ကုပေးရသေးတယ်။ အခု အဏုမြူဆေးပါတ်လည်လို့ အကောင်းပကတိ ဖြစ်နေပြီ။ အသိစောလို့သာပေါ့။ မျက်လုံးပါ လက္ခဏာပြနေပြီ။ လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်းများရောဂါဟာ ကြာရင် မျက်လုံးပြူးလာတယ်။
Labels: Reproductive Health မျိုးပွားခြင်းဆိုင်ရာ ဆေးပညာ, Reproductive organ disorders မျိုးပွားအင်္ဂါ ပြဿနာ
Multiple Sclerosis ရောဂါအကြောင်း
Multiple Sclerosis ဆိုတာဘာလဲ ?
Multiple Sclerosis ဆိုတာ လူသိနည်းတဲ့ရောဂါတွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ် ။ UK နိုင်ငံမှာဆိုရင် လူ ဦးရေ တစ်သိန်းမှာ ၁၂၀ ယောက်ဖြစ်ပွားနှုန်းရှိပြီး နှစ်စဉ်တွေ့ရှိမှုနှုန်းကတော့လူဦးရေ တစ်သိန်းမှာ ၇ ယောက် ခန့်ရှိပါတယ် ။ အပူပိုင်းဒေသတွေနဲ့ ဥရောပမြောက်ပိုင်း တွေမှာအဖြစ်များပြီး မိန်းမတွေ မှာ ယောင်္ကျားတွေထက် ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း ၂ ဆပိုများပါတယ် ။ Multiple Sclerosis ကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ အချက်တွေကတော့ genetic ဆိုင်ရာ
အ ချက်ပေါင်း များစွာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ( Environmental ) ဆိုင်ရာ အချက်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ် ။ မျိုးရိုး လိုက်ဖြစ် ပွားမှုနှုန်းဟာ ၁၅% ရှိပါတယ် ။
Immune စနစ်အရာ CSF လို့ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက်နှင့်ခါးရိုးအတွင်းအား ဆက်နွယ်ထားသော လမ်းကြောင်း အတွင်း မှ အရည်( Cerebro-spinal Fluid) အတွင်းမှာ လှုပ်ရှားသက်ဝင်နေတဲ့ T Lymphocytes တွေ မြင့်မား လာပါတယ် ။ဦးနှောက်အာရုံကြော စနစ်အတွင်းမှာလည်း Immunoglobulin ထုတ်လုပ် မှုဖြစ်စဉ်ဟာ မြင့်မား လာပါတယ် ။ Multiple Sclerosis မှာ ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောရောင် ရမ်းခြင်း တိုက်ခိုက် မှုဟာ သွေးနှင့်ဦးနှောက်အတွင်းလုပ်ဆောင်သူ ( Blood-brain barrier) တွေမှ တဆင့် လှုပ်ရှား သက်ဝင်နေတဲ့ T Lymphocytes တွေ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းမှ စတင် ပါတယ် ။
ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ ?
-အာရုံခံခြင်းနှင့်ဆိုင်သော လက္ခဏာများ ခဏခဏ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခြင်း
-နာကျင်ခြင်းကင်းမဲ့သော Subacute spinal cord lesion
-လက်နှစ်ဖက်တွင် လတ်တလောလှုပ်မရခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရေများ ဆုံးရှုံးခြင်း (Dorsal column deficit)
-Cranial အာရုံကြော ၆ ခြောင်းမြောက် ချို့ယွင်းခြင်း
အခြားလက္ခဏာများနှင့် CNS Demyelination ၏ ရောဂါဖြစ်စဉ်များ
-အမြင်အာရုံသိမ်ငယ်ခြင်းနှင့်ချို့ယွင်းခြင်း (Afferent pupillary defect)
-ကျောရိုးဆစ် ၊ ခြေလက်များနှင့် လည်ဂုတ်ပိုင်းတွင် ထုံကျင်ခြင်း (Lhermitte's symptom)
-ခြေလက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်တုန်ယင်ခြင်း (Postural tremor)
-Trigeminal neuralgia နှင့် Partial Brown-Sequard syndrome
အာရုံကြောချို့ယွင်းခြင်း demyelinating lesions မှာ သူ့ရဲ့လက္ခဏာ ဖြစ်စဉ်တွေဟာ လတ်တလော အနေ နဲ့ နေ့ရက် (သို့မဟုတ်) ရက်သတ္တပါတ်မျှ ဖြစ်ပွားပြီး ရက်သတ္တပါတ်အနည်းငယ်နဲ့ လအနည်းငယ်မှာပဲ ပြန်ကောင်း သွားလေ့ရှိပါတယ် ။ တခါတလေမှာတော့ လေဖြတ်ခြင်းဆန်ဆန် ဖြစ်စဉ်တွေကိုတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ် ။
ဘယ်လိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းတွေနဲ့ သိနိုင်မလဲ ?
Multiple Sclerosis ကိုသိနိုင်မယ့် တိကျတဲ့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုတာ မရှိပါဘူး ။ ဓါတ်ခွဲစမ်း သပ်စစ်ဆေး မှုတွေက ရလာတဲ့အဖြေကို ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ ယှဉ်တွဲပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေကို တွက်ထုတ် ရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် ။ အခြားဖြစ်နိုင်ခြေတွေကို ဖယ်ထုတ်ဖို့ (Exclude) နဲ့ demyelination ဖြစ်စဉ်ကို သတ်မှတ်ဖို့ စမ်းသပ် စစ်ဆေးမှုတွေကတော့
-MRI , Myelography
-Visual evoked potentials
-အခြား evoked potentials
-CSF Examination (ခါးဆီဖောက်၍ စစ်ဆေးခြင်း)
* cell count
* Protein electrophoresis ( Oligoclonal bands)
* Chest X Ray ( ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း)
-Serum angiotensin-converting enzyme (ACE) - sarcoidosis
-Antinuclear antibodies - SLE
-Antiphospholipid antibodies စသည်တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ် ။
Multiple Sclerosis ကိုဘယ်လိုကုသမလဲ ?
Multiple Sclerosis ကိုကုသဖို့ဆိုရင်
၁ ။ လတ်တလောဖြစ်ပွားခြင်း ( acute relapse ) ကိုကုသခြင်း
၂ ။ နောက်ပိုင်းပြန်လည်ဖြစ်ပွားမှုအား ကာကွယ်ခြင်း
၃ ။ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ ( complications) များအား ကုသခြင်း
၄ ။ လူနာ၏ ချို့ယွင်းချက်များ (Disability ) အားကုသခြင်း စသည်တို့ပါဝင်ပါတယ် ။
- Methyl prednisolone iv ( 1g နေ့စဉ် ၃ ရက် ) or orally ( 500mg နေ့စဉ် ၅ ရက်)
Steroids တွေအကြာကြီးပေးနေခြင်းဟာလည်း ရေရှည်ဖြစ်လာမယ့် အရာ ( outcome) ကို မပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါဘူး ။
Azathioprine ကဲ့သို့ Immunosuppressive ဆေးတွေဟာ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားမှုကို လျော့ကျစေပါတယ် ။ ရေ ရှည် အနေနဲ့ လည်းကောင်းပါတယ် ။ ခဏခဏပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ Multiple Sclerosis မှာတော့ Subcutaneous or IM Interferon beta-1a/b ဟာ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားတဲ့အကြိမ်အရေအတွက်ကို ၃၀% ထိလျော့ ချပေးပါတယ် ။ Glatiramer acetate မှာလည်းအလားတူအစွမ်းရှိပါတယ် ။ အထူးအာဟာရတွေဖြစ်တဲ့ Gluten-free , linoleic acid supplements , hyperbaric oxygen therapy တို့ဟာလည်း လူ နာတွေကြား မှာ ရေပန်းစားပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ပိုပြီးကောင်းလာစေတဲ့အချက်တော့မှရှိပါဘူး ။
အရေးကြီးတာက ရောဂါရဲ့ ဘဘာသဖြစ်စဉ်ကို လူနာကို သေချာရှင်းပြဖို့ပါပဲ ။ ဖြစ်ပေါ် လာတဲ့ နောက် ဆက် တွဲ ဆိုး ကျိုးတွေအရ ကုသမှုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
ဥပမာ (၁) Spasticity ( အရိုးအဆစ်များခိုင်ခြင်း)
ကုသမှု - Physiotherapy
-Beclofen 15-100mg (oral ) , Tizanidine 18-32mg
-Local I.M Botulinum toxim , chemical neuronectomy
ဥပမာ (၂) Impotence ( လိင်စွမ်းဆောင်ရည်လျော့ကျခြင်း)
ကုသမှု - Sildenaifil 50-100mg / 24 hours
၄ ။ လူနာ၏ ချို့ယွင်းချက်များ ( disability ) အားကုသခြင်း
Disability ကိုကုသတဲ့နေရာမှာတော့ specialist သူနာပြုတွေအပါအ၀င် Multidisciplinary team လို့ခေါ်တဲ့ သက် ဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေနဲ့ health care professional တွေနဲ့ စုစည်း ပြုစုကုသစောင့်ရှောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ။
Multiple Sclerosis ဟာ neurological ရောဂါဖြစ်တဲ့အတွက် ဆေးပညာနဲ့အလှမ်းဝေးတဲ့သူတွေအဖို့ အသေး စိတ် ကျကျသိနိုင်ဖို့ ၊ Medical terms တွေကို သိရှိနိုင်ဖို့ ခက်ခဲလှပါတယ် ။ အချို့ medical terms တွေဟာ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင် အဓိပ္ပါယ်လွဲမှားမှာစိုးတဲ့အတွက် တတ်နိုင်သမျှဆီလျှော်အောင်တော့ ဖော်ပြပေးထား
ပါတယ် ။ Multiple Sclerosis ဆိုတာ ဒီလိုမျိုးရောဂါပါလား ၊ ဒီလို လက္ခဏာတွေ ရှိပါလား ၊ ဒီလိုကုသနေ ကြပါလား လို့ အနည်းငယ် ဗဟုသုတ ရှိသွားတယ် ဆိုရင်ဖြင့် ဖော်ပြရကျိုးနပ်ပါပြီ ။
Ref : Davidson's Principles & Practice Of Medicine , 20th Edition
Labels: Multiple Sclerosis, Neurological disease
နွေဥတုထဲ သိသိသာသာ ရောက်ပြီမို့ ရာသီဥတုက တစ်စထက်တစ်စ ပူပြင်းကာနေ၏ ။ နေ့လည်ပိုင်း အချိန်များ တွင် အပူ ချိန်များပြီး ညလယ်ပိုင်းအချိန်များတွင်မူ အေးမြနေတတ်၏ ။ရာသီ ဥတု ပြောင်း လဲနေသော ကာ လဖြစ်သောကြောင့် ကျန်းမာရေးကို အထူးဂရုပြုရန်လိုပေသည် ။ မကြာခင်လည်း မဟာသင်္ကြန် ကျရောက်တော့ မည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ရေကစားနိုင်ရန်နှင့် နေပူရှိန်ထဲတွင် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကိုလည်း သိရှိရန်လိုအပ်ပေသည် ။ မိုးဥတုတွင်သာ တုပ်ကွေးဖျားနာများ များတတ်သည်မဟုတ် ။ နွေရာသီ တွင်လည်း သတိမမူပဲ ကျန်းမာရေးကို ဂရုမစိုက်ပါက ရောဂါပေါင်းစုံဝင်ရောက်တတ်ပေသည် ။ ထို့ကြောင့် နွေရာ သီနှင့် ကျန်းရေးဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်နေသော အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည် ။
၁ ။ နွေရာသီနှင့် အာဟာရ
နွေရာသီမှာ အာဟာရဓါတ်ကို ညီညွှတ်မျှတစွာ စားသုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့်ရေ ဓါတ်အမြဲ ဖြည့် တင်းပေး ရန် လိုပါတယ်။ နွေအပူရှိန်ထဲမှာ ချွေးထွက်များတဲ့အတွက် ရေဓါတ်နဲ့ဓါတ်ဆား ( electrolyte) များဆုံး ရှုံးပြီး ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်ခြင်း (Dehydration) ကို ခံစားရနိုင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် နေအပူရှိန်ထဲမှ ပြန် လာပြီး ချွေးထွက်များသောသူများ (ဥပမာ ဂေါက်ရိုက်သများများ ၊ ဘောလုံးသမားများ ) ဓါတ်ဆား ၊ အချိုရည် ၊ ရေနဲ့အရည်ရွှမ်းသော သစ်သီးများကိုစားသုံးရန်လိုအပ်ပါတယ် ။ အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ အသီးအရွက်တွေနဲ့ ပန်းသီး ၊ လိမ္မော်သီး ၊ သစ်တော်သီး ၊ ရှောက်ချိုသီး ၊ စသည်တို့ကို သင့်တင့်မျှတစွာ စားသုံးပေးရန်လိုအပ်ပါတယ် ။
၂ ။ နွေရာသီနှင့်အားကစား
နေအရမ်းပူတဲ့ နေ့လည်နေ့ခင်းအချိန်များမှာ အားကစားပြင်းထန်စွာလုပ်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ် ။ နေ့ လည်နေ့ ခင်းအချိန်များမှာ ထီး ၊ ဦးထုပ်မပါပဲ နေပူထဲကိုမထွက်သင့်ပါဘူး ။ အပူချိန်လျော့နည်းတဲ့ နံနက်ခင်း နဲ့ ညနေစောင်း အချိန်များတွင်သာကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစားပြုလုပ်သင့်ပြီး နေ့လည်အချိန်များမှာတော့ အရိပ် ရ တဲ့ သစ်ရိပ် ၊ ၀ါးရိပ်နဲ့ အိမ်အတွင်းပိုင်းနဲ့အေးမြသောနေရာများတွင်သာ အေးအေးလူလူ အနားယူရန် လိုအပ် ပါ တယ် ။ မဖြစ်မနေ ကိုယ်လုပ်လှုပ်ရှားဖို့ လိုရင်လည်း ရေကို ခဏခဏသောက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ ။
၃ ။ နွေရာသီနှင့် နေထိုင်မှုပုံစံ
နေ့လည်နေ့ခင်း အပြင်ကိုထွက်တဲ့အခါတိုင်း ချည်ထည်ပွပွ လက်ရှည်နဲ့ အဖြူဖျော့ဖျော့များကိုသာ ၀တ်ဆင် သင့်ပါတယ် ။ အဖြူရောင်ဟာ အပူချိန်ကို တန်ပြန်နိုင်စွမ်းရှိပြီး အမည်းရောင်ကတော့အပူချိန်ကို စုပ်ယူထား တဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တက်စေပြီး ချွေးထွက်များစေပါတယ် ။ အပြင်ကိုထွက်တဲ့အခါတိုင်း ထီး၊ဦး ထုပ်ဆောင်းပါ ။ နိုင်လွန်ကဲ့သို့အကျီင်္များ ကိုယ်ကြပ်အကျီင်္များ ဘောင်းဘီများ ၀တ်ဆင်ခြင်း ကိုတတ်နိုင် သမျှ ရှောင်ကြဉ်ပါ ။ နေပူထဲမှပြန်လာပြီးရေချက်ချင်းချိုးတတ်တဲ့အကျင့်ကို ရှောင်ပါ ။ ရေတ၀သောက် ပြီး ချွေးတိတ် မှသာ ရေချိုးသင့်ပါတယ် ။ ချွေးမတိတ်သေးခင် နေပူထဲမှ ချက်ချင်းပြန်လာပြီး ချက်ချင်းရေချိုးပါက အပူရှပ်ပြီး heat stroke ရနိုင်ပါတယ် ။ အသားအရည်ထိမ်းသိမ်းဖို့အတွက်နေပူထဲထွက်တော့မယ်ဆိုရင် Ultraviolent Ray (UV) ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ cream တစ်မျိုးမျိုးလိမ်းထားနိုင်ပါတယ် ။ နေပူထဲမှ ပြန် လာပြီး ရေခဲရေနှင့် မျက်နှာသစ်ခြင်း ၊ ရေခဲရေနှင့် ရေချိုးခြင်းတို့ကိုမှု လုံးဝရှောင်ရှားရပါမယ် ။
၄ ။ နွေရာသီနှင့်သင်္ကြန်
မကြာခင် သင်္ကြန်ကျရောက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဂရုစိုက်စရာအချက်အလက်တွေ အ များကြီး ရှိနေပါတယ် ။ နေပူကြီးထဲမှာ တစ်နေကုန်ရေပက်သူတွေ ၊ ရေပက်ခံထွက်သူတွေအတွက် အပူအအေး မမျှ တပဲ ဖျားနာဖို့လွယ်ကူပါတယ် ။ နေပူထဲ ရေပက်ခံထွက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်နေ ကုန် ရေစိုပြီး ချမ်းအေးခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် အကျီင်္ထူထူ ၀တ်ဆင်ပါ ။ Sun block cream များလိမ်းပါ ။ ဘီယာ အရက်တို့ကို တတ်နိုင်သမျှ သောက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ ။ ဘီယာသောက်မှ အရက်သောက် မှမူးပြီးပျော် စရာကောင်း တာမဟုတ်ပါဘူး ။ မြန်မာ့ရိုးရာသင်္ကြန်ဆိုတာ ဒီအတိုင်း ကြည်ကြည် လင်လင်လေးနဲ့လည်း ချမ်းမြေ့ကြည်နူးဖွယ် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းလှပါတယ် ။ သင်္ကြန်မျာဖြစ်တဲ့ ရန်ပွဲတော်တော် များများရဲ့ အစဟာ အရက်သေစာသောက်စားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတာပါဆိုရင် သင်ငြင်းနိုင်ပါသလား ။ ဒါကြောင့် သင်္ကြန်အ တွင်းမှာ အရက်ကို အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းကို ရှောင်ရှားစေလိုပါတယ် ။
ဒါ့အပြင်လမ်းဘေး စာတွေဖြစ်တဲ့ အချဉ်ပေါင်းထုပ်များနဲ့ သရက်သီး ၊ မရမ်းသီး စတာတွေကိုလည်း မစားသင့်ပါဘူး ။ လူထူထပ် တဲ့အတွက် ရောဂါပိုးပေါင်းစုံပျံ့နှံ့ပြီး ၀မ်းရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ် ။ စားချင် တယ်ဆိုရင် မိမိအိမ်မှာ လတ်လတ် ဆတ်ဆတ် ပြုလုပ်ပြီး ယူဆောင်သွားခြင်းက ပိုပြီးသင့်တော်ပါတယ် ။ ယခုနောက်ပိုင်းသင်္ကြန်တွေမှာ သိမ်မွေ့နူးညံ့မှုတွေပျောက်ဆုံး နေပြီဆိုတာ သင်လည်းသတိထားမိမှာပါ ။အနောက် တိုင်းဆန်ဆန် ပူလောင်တဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှု (ခါးပေါ် ၊ ရင်ပေါ် ၊ တင်ပေါ် ) နဲ့ မိန်းကလေးတွေ သရုပ်ပျက် ကခုန်နေခြင်းဟာလည်း ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ဒါငါတို့ရိုးရာမဟာသင်္ကြန်လို့ ၀င့်ကြွားရမှာတောင် ရှက်ဖွယ်အတိဖြစ်နေပါတယ်။အချိန်မှီမပြင်ဆင်ကြရင်ဖြင့် နောင်နှစ်တွေနှစ်တွေမှာ နောင်လာနောက်သားတွေ
အဖို့ သင်္ကြန်ဆိုတာ ဒီလိုဝတ်ရစားရ ဒီလိုကခုန်ရ ဒီလိုမူးရူးရတဲ့ ပွဲပါလားလို့ ထင်မှတ်သွားရင်ဖြင့် တစ်မျိုးသား လုံး အတွက် ရင်လေး စရာဖြစ် ရပ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ သပြေခက်နဲ့ငွေဖလားနဲ့ နံ့သာ ရည်နဲ့ ရေမ ပက်နိုင် ရင်တောင် ခွက်စောင်းခုတ်ခြင်း ၊ ကြမ်းတမ်း စွာ ရေကစားခြင်းနဲ့ နှမသားချင်း မကြားဝံ့မ နာသာ စနောက်ခြင်း များကို တို့မြန်မာတွေ ရှောင်ရှားဖို့ လိုလာပါပြီ ။
ယနေ့ခေတ်ကြီးဟာ သတင်းအချက်အလက်တွေ အချိန်နဲ့တပြေးညီ စီးဆင်းနေတာနဲ့အမျှ မဟာသင်္ကြန်ရဲ့ ပုံရိပ်တွေဟာ လည်း အချိန်နဲ့တပြေးညီ အင်တာနက်ပေါ် ၊ ဘလော့တွေအပေါ် ၊ Social network တွေအပေါ်နဲ့ Facebook အစရှိတဲ့ လူသုံးများ Network တွေအပေါ် ရောက်ရှိမှာအမှန်ပါပဲ ။ ရှက်ဖွယ်အတိဖြစ်တဲ့ အနောက် တိုင်းဆန်ဆန် မလုံမခြုံ ၀တ်ဆင်ခြင်းများ နဲ့ လမ်းသရဲပုံစံများကိုရှောင်ရှားပြီး မြန်မာဆန်တဲ့ အမျိုးသား အမျိုးသမီးလေးများ ပုံစံ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာ ၀တ်ဆင်ြ့ပြီး အတာသင်္ကြန်ကို ဆင်နွှဲကြမယ်ဆိုရင်ဇြင့် “ ကမ္ဘာ့ အလယ်မှာ ဒါတို့ရိုးရာ မဟာသင်္ကြန်ဟေ့ ” လို့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွား သံတွေညံနေမှာဖြစ်ကြောင်း တင်ပြ ရင်း နွေရာသီ ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် သင်္ကြန် ဆောင်းပါးကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ် ။
စာဖတ်သူပရိတ်သတ်များ နှစ်သစ်အခါသမယမှာ စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်းကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံ ပြီး အေး ချမ်းသာယာ ရှိကြပါစေ ။
(ပုံများအား Google Image Search မှယူပါသည်)
Labels: Health behavior, Health care,့ health education, Health Information Management
အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်လဲ ဖတ်ပါ Menstruation ရာသီ မမှန်...
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၁၂) မိန်းမပီသတာ စိုးရိမ...